Vista's Colorful Planet: ????
ဒါဘာလည်းမမေးနဲ့ မသိပါဘူး။ မသိလို့???? နဲ့ တင်ထားတာ။
မန္တလေးရောက်တော့ မနက်စောစောလမ်းထလျှောက်တာမှာတွေ့ တာ ။
ကြယ်ကြွေတာပဲလား ၊ ဥက္ကာပျံ လား ဘာမှန်းကို မသိဘူး။
လင်းလက်ပြီးတော့ ခပ်ဖြည်းဖြည်းမြေပေါ်ကို ကျလာနေတာ
ကင်မရာမပါလို့ ဖုန်းနဲ့ ရိုက်ထားလိုက်ကြတယ်။
အပေါ်ပုံက ကိုယ်ရိုက်တာ ၊ အောက်ပုံက ကိုကိုရိုက်တာ။
Labels: Mandalay, Miscellaneous
ရီမိုးပြည့်Says:
ချစ်ပေါက် ဆောင်းတုလိုက်လားမမှတ်မိဘူး ။မတုဘူးထင်တယ် ..ဘာကြီးမှန်းမသိလ်ို့ စိတ်ဝင်စားနေတာနဲ့ လေ။
မသိပါ.. အဲ့ဒါမျိုးမြင်ရင် လက်သွက်သွက်နဲ့ ပုံလှမ်းရိုက်ဖို့ အတော်ကြိုးစားရမှာ.. နှစ်ယောက်လုံး တော်ကြတယ် =)
ဂလောက်မြန်တဲ့အလင်းတန်းကို ရိုက်နိုင်တာ တချိန်လုံး နေ့ ရောညပါ ကင်မလာကြီးကိုင်ထားပုံရတယ် လက်သွက်ချက်
မသိရင် သိအောင်လုပ်ပြီး တင်ပါလား သများတွေကို အလကား ခေါင်းစားအောင် လုပ်တယ်
မရွန်းမီ - ဟိဟိ ဒီလောက်သိရင်ရပြီ။
ကလူထွေး - လုပ်တော့မယ်။
ပိုး အရူးမ - ဖုန်းနဲ့ ရိုက်တာပါဆို ကင်မလာမပါဘူး။
ဥစ္စာစောင့်တွေ အသိုက်ပြောင်းတာ။ အဲ့နေရာကို တွေ့အောင်ရှာပြီး တူးလိုက်တာ မဟုတ်ဘူး။ အပုံကြီး ရမှာ...။
ဘာကိုပြောမှန်းတောင် မသိလို့ ကွန်မန့်တွေဖတ်ပြီးမှ ပုံပြန်ကြည့်ရသေးတယ်။ အော် အဲဒါကို ပြောတာကိုး။
This click will explain to you if you really dont know.
When I was teens, someone (maybe BBC Burmese) talked about small pieces of astroids which entered atmosphere which hasahigh density. Falling with high speed (due to gravity) results inahigh frictions, leading toaself-burning before toughing the surface of earth.
The same thing... NASA had to manage space shuttle with special shield to protect heat coming up from friction when it is decending :)
btw, i lost2marks in Physics in metriculation.
If it was moving slowly, it could beaplane.
A plane ?? then it could beaplane crash !! cuz it was falling down ... LOL
ဒါကဖုန်းနဲ့မို့လို့ သိပ်မကွာတာပါ.. ကင်မလာကြီးနဲ့ရိုက်တဲ့ပုံတွေမှာ အကွာကြီးကွာတာ သိပြီးသား ငှင်းငှင်း..
အမ် .. တစ်ချို့ ကျတော့လည်း ကင်မလာနဲ့ ရိုက်တာတောင်မှ သူများဖုန်းနဲ့ ရိုက်တာလောက်မကောင်းတာတွေရှိသေးတယ် ..ဘူတွေပါလိမ့် ဟိဟိ
ဘလက်ကီ နဲ့ ဘော်ဘီ ( သို့ ) The canines I loved ( 3...
ဘလက်ကီ နဲ့ ဘော်ဘီ ( သို့ ) The canines I loved ( 2...
ဘလက်ကီ နဲ့ ဘော်ဘီ ( သို့ ) The canines I loved ( 1...
Kumamoto Prefecture ( Japan )